Boots - fironana - ririnina 2016-2017
Ny boots - iray amin'ireo karazana vehivavy amin'ny ririnina amin'ny ririnina indrindra. Ny fomba fitongilanana avo dia ahafahan'ny ranjony hijanona amin'ny fampiononana sy ny filaminana mandritra ny fotoana lava. Ankoatra izany, ity safidy ity dia maneho foana ny endriny, ny endriny ary ny vehivavy, ary manantitrantitra ny firindran'ny tongotra sy ny fahasoavan'ny dingana. Ny lazan'ny boots ihany koa dia noho ny fahaizan'izy ireo. Na izany na tsy izany, kiraro avo dia tsara ho an'ny akanjo am-pitiavana sy ny pataloha, pataloha sy jeans, kezhualnyh jacks sy akanjo hoditra, akanjo marevaka sy akanjo lava. Izany no mahatonga ny mpizahatany fanatanjahan-tena manolotra fanangonana vaovao sarobidy. Ary amin'ity lahatsoratra ity dia hiresaka momba ny fironana lamaody farany indrindra amin'ny kiraro 2016-2017 isika.
Boots ny ririnina - fironana 2016-2017
Rehefa mifidy akanjo amin'ny ririnina dia tena zava-dehibe ny mijanona ho mendrika. Amin'ny ankapobeny, ny ankamaroan'io akanjo io dia manintona ny saina amin'ny vehivavy sy ny fahamendrehan'ny tompony amin'ny endrika akanjo tsy mendrika. Ireo endri-javatra toy izany sy ireo mpanamboatra fitarihana ao amin'ny fanangonana ny ririnina 2016-2017. Noho izany, safidy malaza tamin'ny vanim-potoana vaovao dia modely mampifandray ny laconism sy ny fanehoana hevitra. Ireo mpahaikanto dia manolotra ny atiny amin'ny fanoratana, fa ny fitaovana tsy fantatra sy tsy mahazatra, endrika tsy misy mari-pamantarana. Amin'ny vanim-potoana 2017, ny fingodongodony dia booty vita amin'ny hoditra amin'ny hoditra, hoditra patanty, ary ny fametrahana ny hoditra miaraka amin'ny akanjom-boninkazo na ny kitapo.
Fivarotam-pirahalahiana iray izay hanampy amin'ny fampisehoana ny maha-izy azy sy ny maha-izy azy ny modely misy vy miaraka amina firavaka vita amin'ny hoditra sy lamba - jute, lamba, kodiarana manify. Raha raisina fa ny vokatra vita amin'ny hoditra dia heverina ho mahazatra indrindra amin'ny famoriam-bola vaovao, azonao atao ny miady hevitra momba ny fifantohan'ny mpanamboatra ny fampiharana sy ny fanao amin'ny kiraro. Andeha hojerentsika hoe inona ny boots ny vehivavy amin'ny fironana amin'ny ririnina amin'ny 2016-2017?
Boots miaraka amin'ny kiraro - fironana ririnina 2016-2017. Ny modely amin'ny voditongotra dia aseho amin'ny endrika mendri-piderana sy mendrika. Amin'ny faran'ny vanim-potoana vaovao, ny kiraro lehibe sy matanjaka kokoa dia ny kiraro. Tsara ny manamarika fa ny halatra lamaody dia lafo kokoa noho ny ao amin'ny taharo taloha.
Boots eo amin'ny sehatra - fironana ririnina 2016-2017. Ireo modely ireo dia angamba, ny safidy maro samihafa. Ao amin'ny lamaody sy ny sehatra mahitsy ary mahitsy, ary ny fiakarana kely, ary ny toeram-pivoriana kely kely, ary koa ny fitambaran-tsiramamy matevina amin'ny tongotra mitaingotra.
Boots amin'ny ririnin-tsolika amin'ny làlana midadasika iray - fironana 2017. Ny safidin'ny ankamaroan'ny olona tsy manala modely amin'ny manga sy manga. Ny endriky ny lamaody dia heverina ho boots amin'ny mifanohitra ny fanangonana ny ampahany tokana sy ny ankamaroany. Eritrereto hoe avo roa heny ny halavany kely. Ankoatra izany, ny lamaody dia mitoetra ho irery ihany-traktera.
Volofokely misy volombava
Inona ireo solomaso amin'ny lamaody amin'ny fahavaratra 2015
Akanjo maotina etona 2016
Ireo kofehy fararano-ririnina 2015-2016
Toetrandro tankini ho an'ny feno 2013
Ny loko volomparasy mody fararano-ririnina 2015-2016
Ahoana ny fomba handoko ny lamba fisaka eo amin'ny balcony?
Ny endriky ny atin'olombelona
Fihetseham-po! Porofo 12 momba ny Safodrano maneran-tany
Vehivavy kiraro fohy
Ny fototeny hemorrhoidal - fitsaboana
Brad Pitt dia nampiseho tatoazy vaovao
Ahoana ny fomba hanaovana ny saribakoly Voodoo?
Ankizy kintana 12, izay, tahaka ny rano kely roa, dia mitovy amin'ny ray aman-dreniny
Fanazaran-tena ho an'ny fampiofanana maraina